ရောင့်ဂီတပုံစံ Plaid အင်္ကျီ Dress - Buddhatrends
ရောင့်ဂီတပုံစံ Plaid အင်္ကျီ Dress
$50.15 $59.00 သငျသညျ (15% Save$8.85)
Black & White / S က Black & White / M က Black & White / L ကို Black & White / XL Black & White / XXL Black & White / XXXL Black & White / 4XL Black & White / 5XL
အဆမတန်ကြီးမား Dress ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ကဖော်စပ်နှင့်ကိုက်ညီမှကြွလာသည့်အခါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် plaid ဒီဇိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, ဒီအဆင်ပြေချောင်ရှပ်အင်္ကျီစားဆင်ယင်သင့်ရဲ့ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်၏အကြိုက်ဆုံးတစ်စုံတစ်ဦးသည်ဝမ်းခွဲဂျင်းဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောများအတွက်ဦးထုပ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်နိုင်ပါသည် ရောင့်ဂီတကြည့်.
စားဆင်ယင်အတွက်အဆင်ပြေဘက်အိတ်ကပ်မယ့်သင်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ရောက်စေဖို့ချင်ပါဘူးအမှု၌သင်၏သော့, အသေးစားပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်ဖုန်းအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးလျော့ရဲရဲနဲ့အဆမတန်ကြီးမားကြံ့ခိုင်ရှာနေလျှင်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားကိုယူသွားပါ!
အားလုံးဘောင်အမျိုးသမီး fit ရန်ကျစ်လျစ်သေးသွယ်ပေါင်းအရွယ်အစားကနေ, က S ထံမှ 5XL မှမရရှိနိုင်ပါ။
Neckline: Turn-Down ကော်လာ